Shiinaha Ahama Steel tuuboyinka saarayaasha iyo shirkado | JinJuFeng
Tuubo bir ah oo aan xuduud lahayn, ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha
Waxaan nahay soo saare isla markaana kaydiyayaal u ah dhuumaha birta ah ee aan xadka lahayn, waxaynu hubin karnaa in si dhakhso leh loo gaadhsiiyo.
Cabir Dhumucda darbiga: 1-100mm, Dhexroor ka baxsan: 10-1050mm (wareeg)
Dhererka Length: Hal dherer aan kala sooc lahayn / Dherer laba jibbaaran ah
5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m ama macaamil ahaan dalabyada dhabta ah
Heerka ASTM A53, ASTM A106, BS1387, GB / T9711, GB / T3901, ASTM A252, GB / T8711, BS 6363, JIS G3466, EN 10219, GB / T 3094-2000, GB / T 6728-2002 iwm
Waxyaabaha Q195-Fasalka B, SS330, SPC, S185
Q215-Fasalka C, CS Nooca B, SS330, SPHC
Q235 --- Fasalka D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2
ASTM A53 GrA, GrB; STKM11, ST37, ST52, 16Mn, iwm.
Fasalka Fasalka A, Fasalka B, Fasalka C
Qaab Qaybta Barxad, Laanod, Wareeg,
Xirxirida Xidhmo, ama nooc kasta oo midabbada PVC ah ama shuruudahaaga ah
Dhammaad Jadwalka hoose / Beledled, oo lagu ilaaliyo dabool balaastik ah oo ku yaal labada daraf, goos goos goos ah, jeex jeexan, xargaha iyo isku xidhka, iwm.
MOQ 1 Tan, sicir badan ayaa ka hooseeya
Daaweynta dusha sare 1. Galvanized
2. PVC, Madoow iyo midab rinjiyeyn ah
3. Saliid Transparent, anti-miridhku
4. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha
Codsiga 1. Dayrarka, aqalka dhirta lagu koriyo, tuubada albaabka, aqalka dhirta lagu koriyo
2. Dareeraha cadaadiska hooseeya, biyaha, gaaska, saliida, tuubada khadka
3. Gudaha iyo dibeddaba dhismaha dhismaha
4. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay dhismaha iskudhaf ah kaas oo aad uga jaban uguna habboon
Asalka Liaocheng EE Shiinaha
Shahaadooyinka API ISO9001-2008, SGS.BV
Waqtiga dirida Badanaa 10-45 maalmood gudahood kadib helitaanka lacagta hormariska ah
Isticmaalka Gaadiidka Dhuumaha, Tuubo kuleyliyaha, Haydarooliga / Gawaarida Gawaarida, Saliida / Gaaska Qodida, Cuntada / Cabitaanka / Alaabada Caanaha, Warshadaha Mashiinka, Warshadaha Kiimikada, Macdanta, Dhismaha & Qurxinta, Ujeedo Gaara
Shuruudaha Bixinta L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Lacagta Gram
Waqtiga dirida Badanaa 10-45 Maalmood Gudahood Kadib Marka La Helo Horumar
Astaan ​​ganacsi Jinjufeng
1. Ma waxaad ka ganacsataa shirkad ama soo saare?
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah tuubooyinka birta, shirkadeenuna sidoo kale waa shirkad ganacsi oo ajnabi ah oo xirfad iyo farsamo badan u leh soosaarida birta. Waxaan leenahay khibrad badan oo dhoofinta ah oo ah qiimaha tartanka iyo adeegga ugu fiican ee iibka kadib. Marka taa laga reebo, waxaan ku siin karnaa tiro ballaaran oo ah alaab bir ah si loo buuxiyo baahida macaamiisha.
2. Ma ku keenaysaa alaabta waqtigeeda?
Haa, waxaan balan qaadeynaa inaan ku siino alaab tayo fiican leh isla markaana aan ku gaarsiino waqtigii loogu talagalay iyadoo aan loo eegin haddii qiimaha wax badan iska badalo iyo in kale.
3. Shaybaar ma bixisaa? ma lacag la’aanbaa mise waa siyaado?
Muunada waxay siin kartaa macaamilka lacag la’aan, laakiin xamuulka waxaa dabooli doona koontada macaamiisha. Xamuulka muunada waxaa lagu celin doonaa koontada macaamiisha ka dib markaan wada shaqeyno.
4. Sideen ku heli karaa oraahadaada sida ugu dhakhsaha badan?
E-maylka iyo fakiska ayaa lagu hubin doonaa 24 saacadood gudahood, dhanka kale, Skype, Wechat iyo WhatsApp ayaa khadka tooska ah ku jiri doona 24 saacadood gudahood. Fadlan noo soo dir shuruudahaaga iyo dalbashada macluumaadka, faahfaahinta (Darajada birta, cabbirka, tirada, dekedda loo socdo), waxaan ka shaqeyn doonnaa qiimaha ugu fiican dhowaan.
5. Ma haysaa wax caddeyn ah?
Haa, taasi waa waxa aan u dammaanad qaadno macaamiisheenna. Waxaan leenahay shahaadada ISO9000, shahaadada ISO9001, shahaadooyinka API5L PSL-1 CE iwm iwm alaabooyinkayagu waa kuwo tayo sare leh waxaanan leenahay injineero xirfad leh iyo kooxda horumarinta
Bixinta <= 1000USD, 100% ka hor. Bixinta> = 1000USD, 30% T / T ka hor, dheelitirka ka hor rarka ama laga bixiyay nuqulka B / L 5 maalmood oo shaqo gudahood. 100% L / C aan laga hortagi karin L / C marka la arko waa xilli bixinta lacag bixinta sidoo kale.
7. Miyaad aqbashaa kormeerka qeybta saddexaad?
Haa gabi ahaanba waan aqbalnaa.
Xiga: Qaybta barroosinka
Astm A1016 bilaa biibiile steel
Astm A106 bir aan xuduud lahayn oo bir ah
Astm A53m bir aan xuduud lahayn
Astm A999 biibiile bir aan xuduud lahayn
Carbon Steel aan xuduud lahayn tuuboyinka (ASTM A106 GR. BASME ...
Tube bir aan xuduud lahayn (A106, A53, API 5L, ST37, ST52, ...